Iqela lakwa-Paxful: Masikwazise Kwabo Basebenza Nathi
Abasebenzi bakwa-Paxful bayintliziyo yenkampani yethu. Nakuba sineenkcubelo neemvelaphi ezahlukahlukeneyo, sisoloko sifunda omnye komnye. Eyona nto imnandi? Wonke umntu anganamava eelwimi neenkcubeko ezahlukahlukeneyo. Sineqela lemveliso elizinikeleyo kodwa iplatfomu yethu ingunobangela wentsebenziswano kumsebenzi nakuluvo lweqela nesebe ngalinye.
Umcebisi Ngezomthetho (United States of America)
Yintoni eyona nto liungenakuphela usuku ungayenzanga apha e-Paxful?
Kukuhamba ndiqhula nabo ndisebenza nabo.
Yintoni ekwenza uhlale ukhuthazekile apha e-Paxful?
Amathuba okukhula. Le nkampani inamathuba amangalisayo okukhula, kwaye ndiyazi ndingadlala inxalenye enkulu ekuboneni siyifikelela loo mpumelelo.
Yintoni eyona nto mayela nezemali ze-Paxful/P2P onqwenela ukuba wonke umntu ebeyazi?
Abantu bayazibuza ukuba kutheni ezemali ze-P2P zibalulekile. Ibhanki Yehlabathi iyavuma ukuba abantu abaphantse babe ziibhilyoni ezi-2 abanalo ufikelelo lweenkonzo zemali oluqhelekileyo. U-Paxful ubonelela abo bantu ithuba lokuzibandakanya kwinkqubo yemali.
Igosa Eliyintloko Lokuthobela (United States of America)
Umfutho nokuzimisela ekuziseni i-Bitcoin ebantwini.
Leliphi elona galelo lizuzisayo ngomsebenzi wakho?
Ndijongene nokuqiniseka ukuba siyazibamba izaphuli-mthetho. Ndiye ndanika iqela lam izixhobo neenkqubo ukuze sikwenze oku. Asilunyamezeli urhwaphilizo nezenzo ezingekho mthethweni kwisaythi yethu.
Umzobi Wedijithali (Philippines)
Yiyiphi eyona ngenelo isemcimbini apha kwa-Paxful?
Ndiyazithanda iingenelo zejim nezemasaji! Le nkampani iyikhathalela nyhani impilontle yabasebenzi bayo ibe eli lungelo likunceda uphumle kamnandi ingakumbi kwiintsuku zaxa ubusebenze nzima kakhulu.
Ndingathanda abantu bazi ngakumbi ngale nkampani iyonke. Inkampani yezemali ka-P2P ibonelela ngezinto ezininzi, ingakumbi kwabo bangenamali.
Sesiphi isiganeko osithandayo senkampani yakwa-Paxful awakhe waya kuso ukuza kuthi ga ngoku?
Ukumaketha Ngeevidiyo (Philippines)
Into endenza ndityhalele phambili ngamathuba angapheliyo okukhula apha. Kwanaxa ndandisemtsha, babendithemba mna nomsebenzi wam. Bandinika ithuba lokubonisa oko ndinokukwenza.
Qho siphuma siyobethwa ngumoya, kuba mnandi ngeyona ndlela ibe eyona ndlela intle yokomeleza iqhina kunye nabo ndisebenza nabo kuxa singekho semsebenzini!
Umsebenzi wam undivumela ukuba nditshintshe ukuzimisela kwam kube ngumsebenzi oba negalelo kwabo babukela ezi vidiyo sizenzayo.
Umhlalutyi Womgangatho Woluvo (Philippines)
Ndifuna wonke umntu abe nolwazi olufanelekileyo lwendlela i-Bitcoin esebenza ngayo ngokuqhelekileyo nendlela inkqubo yokurhweba esebenza ngayo kwa-Paxful ukuze baqonde ngcono ukuba akungebi bayaqhathwa na okanye akunjalo.
Yintoni ongathanda ukubona u-Paxful eyiphumeza okanye eyenza njengenkampani kule minyaka imbalwa izayo?
Xa esiba yeyona nkampani enkqenkqeza phambili kwimali yedijithali nakwiplatfomu yokurhweba ye-P2P!
Umphuhlisi we-PHP (Estonia)
Ukonwabela iziqhamo namantongomane ekhitshini, ingakumbi ii-cashews.
Abantu endisebenza nabo kunye neenjongo zenkampani ezinceda abantu bafikelele kwiinkonzo zemali ebebekade bengakwazi ukufikelela kuzo.
Ukufumanisa ukuba kukho iindlela zokwenza imali zamanyhani, ezinengeniso ku-Paxful nokuba asinguye wonke umntu ongumqhathi.
Injineli ye-Kubernetes (Estonia)
Ukuphunga ikofu kunye nabo ndisebenza nabo. Lixesha elihle lokufumana uluvo olungacwangciswanga kuye nabani na ndize ndifunde ukuba kwenzeka ntoni kwamanye amasebe. Iincoko ezingacwangciswanga zonga iiyure esizichitha kwiintlanganiso.
Ijim, ukutya esikulungiselelwayo, iintsuku zokungaphangeli. Noko ke, eyona nto isoloko ilityalwa kukuba u-Paxful yeyona nkampani ithembekileyo kwendakha ndazisebenzela ebomini bam. Benza konke okusemandleni ekwenzeni usuku lwakho lube tofotofo ngakumbi baze bakwenze uzive ubalulekile.
Esona siganeko endasonwabelayo yayiziiNtsuku zeHlobo, xa yonke inkampani, kuquka wonke umntu osuka kwezinye iiofisi, sadibana sonke kuhambo lokwakha iqela oluya e-Split, e-Croatia. Kwakumnandi ukudibana nabo ndisebenza nabo, nokwazi ngcono wonke umntu, size sakhe umoya omhle eqeleni.
Ukuthobela (Hong Kong)
Iziphumo namalungu eqela lam.
Sizama ngako konke okusemandleni ukukhusela kokubini abathengisi kunye nabathengi! Into yokugqibela esiyifunayo kukugcina i-BTC yakho.
Ukuhambela utyelelo noqeqesho kwezinye iiofisi ngenqwelo-moya.
Umphathi Wamahlakani (Estonia)
Kukho amathuba amahle okukhula kokubini kubuchule obungokwengcali nobokuphatha.
Zonke iziganeko zakwa-Paxful ziyonwabisa! Kodwa eyona ithandwa kakhulu ziiNtsuku zeHlobo zango 2019, apho sachitha iveki yonke e-Croatia.